HomeWararka CiyaarahaHorudhac: Ac Milan Vs Liverpool ee Champions league-ga Guruub B, Wararka Labada Koox iyo Shaxda Macquulka
December 7, 2021 Wararka Ciyaaraha, Champions League, Falanqeynta Kulamada 0
Liverpool ayaa raadin doonta guusheedii lixaad, lix kulan oo Champions League ah oo xilli ciyaareedkan 2021/22 ay dheeshay, marka ay caawa garoonka San Siro Stadium ugu tagto AC Milan oo iyaduna halgan u geli doonta sidii ay u guuleysan lahayd, si ay ugu soo gudbi karto wareegga 16ka.
Jurgen Klopp ayay kooxdiisu mar horeba kaalinta koowaad kaga soo gudubtay Group B, waxaanay dhamaantood soo garaacday saddexda kooxood ee ku wehelinaya ee FC Porto iyo Atletico oo ay min laba jeer soo garaacday iyo AC Milan oo ay halmar kasoo adkaatay.
Ac Milan Olivier Giroud , Samu Castillejo iyo Ante Rebic ayaa ku biiray qeybta caafimaadka xidiga Pietro Pellegri , ayaa Ciyaarta looga saaray 15 daqiiqo ciyaartii Salernitana ee Sabtidii isagoo qaba xanuun gumaarka ah.
Zlatan Ibrahimovic ayaa hogaamin doono weerarka ka dib markii la nasiyay isbuucaan, laakiin Davide Calabria ayaa weli maqan, Simon Kjaer ayaana dhowr bilood ku maqnaan doona dhaawac xun oo ACL ah.
Soo laabashadii dhawaa ee Mike Maignan ayaa ah mid sare u kac ah, si kastaba ha ahaatee, bandhigii Messias ee ka dhanka ahaa Atletico ayaa laga yaabaa inaysan ku filneyn inuu meesha ka saaro Brahim Diaz.
Rafael Leao ayaa sidoo kale lagu soo waramayaa inuu seegi doono ka dib markii uu jug ka soo gaaray bowdada isbuucaan, sidaas darteed Rade Krunic ayaa laga yaabaa inuu ku soo bilowdo line-upka bidix.
Liverpool, Joe Gomez iyo Naby Keita ayaa ku soo laabtay tababarka waxaana laga yaabaa inay ku soo laabtaan bartamaha isbuuca, laakiin Roberto Firmino , Curtis Jones , Harvey Elliott iyo James Milner oo ganaaxan ayaa dhamaantood maqan.
Gomez iyo Keita ayaa hubaal ah in aan halis loo galin doonin garoonka laakiin waa in ay jiraan fursado ay Tyler Morton iyo Alex Oxlade-Chamberlain ku soo bilaaban karaan dhexda xilli uu Thiago Alcantara nasiino ku jiro.
Ibrahima Konate , Kostas Tsimikas , Neco Williams iyo Takumi Minamino ayaa sidoo kale loo qeyb ka noqon kara XI, la yaabna ma noqon doonto in la arko Origi – oo Klopp ku kaftamay inuu ‘buug ka qori doono’ – inuu hogaamiyo line-ka.
Garoonka San Siro Stadium.